ကြံ့ခိုင်, perfectlyုံ alignment ကို အုတ်ခြေလှမ်းများ သင့်အိမ်ကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။ အသေးစိတ်ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်သောအခါအုတ်ခဲများသည်နေ့စဉ် ၀ တ်ဆင်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ပြီးဆယ်စုနှစ်များစွာကြာရှည်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏လှေကားကို Turf ထဲထည့်ပါ တည်ငြိမ်မှုရရန်မြေကြီးထဲကို ၀ င်နေသောအုတ်ခဲများကိုတည်ဆောက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အဆင့်တစ်ခုလုံးကိုအုတ်ထိန်းထားသည့်နံရံဖြင့်ဘောင်ခတ်ထားပါ။ အလျားလိုက်အုတ်တစ်တန်းဖြင့်နံရံကိုပိတ်ထားပါ။ ၎င်းသည်သူတို့၏အသွင်အပြင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးနွေ ...
တစ် ဦး ကအုတ်ဟင်းလင်းပြင်, ဒါမှမဟုတ်ကုန်းပတ်? အဖြေအများစုအတွက်ခက်ခဲသောအဖြေမဟုတ် – လှပသောအုတ်သည်အချိန်တိုင်းနီးပါးအနိုင်ရလိမ့်မည်။ သို့ဆိုလျှင်လူတိုင်းသည်အုတ်ခဲဟင်းလင်းပြင်ကိုဘာကြောင့်မလုပ်ကြတာလဲ။ အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်ရှိသော်လည်းနံပါတ်တစ်သည်များသောအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်အားအုတ်ဖိုခန်းတစ်ခုတွင်ထားရန်ငှားရမ်းခြင်းသည်အများအားဖြင့်အလုပ်သမားများပါဝင်သောကြောင့်ကုန်းပတ်တည်ဆောက်ခြင်းထက်ပိုကုန်ကျသည်။ DIY ပရောဂျက်တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်ရုတ်တရက် ပို၍ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြစ်လာပြီးမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပါကသင့်အိမ်သို့ပင်တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ပတ်ပတ်လည်ကုန်းပတ်တိုင်းကိုမနာလိုဖြစ်သည့်အုတ်ဖုတ်အိမ်တစ်ခုလုပ်ရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုသာလိုက်နာပါ။ အဆင့် ၁ ...
Semi-Transparent Deck Stain နှင့် Transparent Deck Stain
သင့်အနေဖြင့်ပုံမှန်စွန်းထင်းရန်လိုအပ်သည့်သစ်သားကုန်းပတ်တစ်ခုရှိပါကသစ်သား၏သဘာဝအသွင်အပြင်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိဘဲအကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုပေးသည့် Semi-transparent ကုန်းပတ်အစွန်းကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။ အကောင်းမြင်သူများစွာသည်ပွင့်လင်းသောကုန်းပတ်အစွန်း (သို့) မရှင်းလင်းသောရွေးချယ်မှုထက် Semi transparent Deck Stain ကိုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ Semi-Transparent Deck Stain ကိုဘာကြောင့်သုံးသင့်သလဲ။ Semi-transparent Deck Stain ...
လူများသည်ကားဂိုဒေါင်ကြမ်းခင်းအပေါ်ယံပိုင်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကားဂိုဒေါင်၏အသွင်အပြင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်လိုကြသည်။ ရွေးချယ်ရန်အမျိုးအစားအနည်းငယ်ထက်မကရှိသော်လည်းဤဆောင်းပါးသည်လူကြိုက်များသောအချို့ကိုကြည့်မည်။ 1. Epoxy ကားဂိုဒေါင်ကြမ်းပြင်ကုသမှု Epoxy ကားဂိုဒေါင်ကြမ်းခင်းကုသမှုများသည်သင်၏ကားဂိုဒေါင်ကိုအသေအချာကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ရေနံအစွန်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Epoxy ကြမ်းခင်းများသည်ရေကိုပုတီးစိပ်စေသဖြင့်သင်၏မီးဖိုချောင်ကောင်တာများကဲ့သို့ယိုဖိတ်မှုများကိုသုတ်နိုင်သည်။ epoxy ဆေးသုတ်ရာတွင်အရောင်ထည့်ခြင်းသည်ကြမ်းပြင်ရှိမစုံလင်မှုများကိုဖုံးကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုပြီးစိုစွတ်သောတာယာများဖြင့်မောင်းနှင်သည့်အခါမတော်တဆဖြစ်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ Epoxy ကုသမှုများသည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစွာလိုအပ်သည်။ epoxy သုတ်ဆေးကိုသင်မသုံးမီကွန်ကရစ်အစွန်းအထင်းများသို့မဟုတ်တံဆိပ်ခတ်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အလုပ်ကိုကောင်းစွာမပြုလုပ်ပါက၊ epoxy ...
ကွန်ကရစ်အိမ်ခေါင်မိုးများသည်များသောအားဖြင့်စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများပေါ်တွင်တည်ဆောက်လေ့ရှိသည်၊ သို့သော်ကွန်ကရစ်ခေါင်မိုးများနှင့်ကွန်ကရစ်ရေငုပ်များနောက်ကျချိန်တွင်ကိုယ်ပိုင်အိမ်များဆောက်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုရန်လူကြိုက်များလာသည်။ ဤအရာသည်အခြားရွေးချယ်မှုများထက်သက်တမ်းပိုရှည်သော်လည်း၊ အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းများကဲ့သို့မဆိုဒြပ်စင်များသို့လည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ရေစိုခံသည့်အပေါ်ယံလွှာဖြင့်သုတ်လိမ်းခြင်းသည်သင်၏ပျက်စီးခြင်းကိုထေမိစေရန်နှင့်သင်၏ခေါင်မိုးသည်တာရှည်ခံရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုသင်မည်သို့ကောင်းစွာပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုနောက်ဆောင်းပါးကဖော်ပြပါမည်။ သင့်ခေါင်မိုးကိုသန့်ရှင်းပါ သင်၏ခေါင်မိုးကိုအောင်အောင်မြင်မြင်တံဆိပ်ခတ်နိုင်ရန်ပထမ ဦး စွာသန့်ရှင်းသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုနှင့်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်ဖုန်သို့မဟုတ်အပျက်အစီးများကိုမဆိုဖယ်ထုတ်ရန်တွန်းလှန်တံမြက်စည်းနှင့် dustpan ကိုသုံးပါ။ သင့်၏အချိန်ကိုယူပါ၊ သို့မှသာသင်ဤအရာများကိုသေချာစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသေးစားပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပါ ကွန်ကရစ်သည်အခြားမည်သည့်အမိုးပုံစံမျိုးမဆိုကဲ့သို့သောအက်ကြောင်းများနှင့်ယိုစိမ့်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ...
သဘာဝသစ်သားသည်လုံလောက်သောထောက်ပံ့မှုနှင့်အမျိုးမျိုးသောဆွဲဆောင်မှုကြောင့်အိမ်ဆောက်လုပ်ခြင်းကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သည်။ Side နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၎င်း၏ထူးခြားသော၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအလှတရားကိုပလတ်စတစ်နှင့်ဗီနိုင်းတို့တွင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားပြီးတည်ဆောက်သူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အိမ်ဒီဇိုင်းကိုအစားထိုးပေးခြင်းသည်သဘာဝကျက်သရေနှင့်ရေရှည်အသုံး ၀ င်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မကြာသေးမီကပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့် ပိုမို၍ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအိမ်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများလိုအပ်သောခေတ်ရေစီးကြောင်းများကြောင့်ယခုသဘာဝသဘာဝရွေးချယ်မှုကို ထပ်မံ၍ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြီးခေတ်မီအိမ်ဝယ်သူများအတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်သည်။ သင်အိမ်၏အပြင်ပန်းအတွက်မည်သည့်အရာကိုအသုံးပြုမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ၊ သဘာဝသစ်သား၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများနှင့်မည်မျှတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်ကိုလေ့လာပါ။ အကောင်းအဆိုး သစ်သားပုံသဏ္theာန်နှင့်ခံစားမှုကိုတုပရန်အခြားပစ္စည်းများတီထွင်ခဲ့သော်လည်းသဘာဝသစ်သားမျက်နှာပြင်သည်သာ၎င်းကိုသဘာ ၀ ...
ယခုအားဖြင့်သင် pallets ထဲကသင်ဖန်တီးနိုင်သမျှသောအံ့သြဖွယ်အမှုအရာဖေါ်ပြခြင်း Pinterest တံသင်နှင့် Facebook လင့်များကိုမြင်ရပါတယ် ခုံတန်းရှည်, ဟင်းလင်းပြင်ပရိဘောဂ, သစ်သားဆိုင်းဘုတ်များ, အခင်း, အိမ်နောက်ဖေးသွန်းလောင်း, နံရံ paneling နှင့်ပိုပြီးရှိပါတယ်။ ထိုအခါသင်ကဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနောက်ကွယ်မှ stacked အခမဲ့ ...
ခိုင်မာသောအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ရာတွင်ကွန်ကရစ်အုတ်များအသုံးပြုခြင်းသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ကွန်ကရစ်လုပ်ကွက်များသည်ကွန်ကရစ်သွန်းခြင်းထက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအုတ်မြစ်များနှင့်နံရံများတွင်မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကွန်ကရစ်လုပ်ကွက်များကိုကွန်ကရစ်သွန်းလောင်းပြီးပုံသဏ္intoာန်အဖြစ်ပုံဖော်သည်။ သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတစ်ခုစီတွင်ဆွန်းဆဲလ် ၂ ခုရှိသည်။ လုပ်ကွက်များသည်ယေဘူယျအားဖြင့် ၁၆ လက်မ၊ အနက် ၈ လက်မနှင့်အမြင့် ၈ လက်မရှိသော်လည်းအခြားမူကွဲများရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်စေ perpendicular (သို့) တည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်စေရန်စုပုံထားတတ်သည်။ ...
Fiber-Cement Siding – သင်သိသင့်သိထိုက်သောအရာ
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖိုင်ဘာ – ဘိလပ်မြေဘက်လိုက်ခြင်းသည်စျေးကွက်တွင်အပူဆုံးကုန်ပစ္စည်းဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်သစ်သား၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ဘဲပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းကိုတီဗီရှိုးများ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့်လူကြိုက်များသောအိမ်တိုးတက်မှုစတိုးဆိုင်များတွင်ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်ဖိုင်ဘာ – ဘိလပ်မြေဘက်လိုက်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်အတွက်မှန်ကန်ပါသလော။ ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေဆိုတာဘာလဲ ၎င်းသည်ဘိလပ်မြေ၊ သဲနှင့် cellulose ဖိုင်ဘာအရောအနှောများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် – အားလုံးသည်ခိုင်ခံ့ပြီးကြာရှည်ခံသည့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ရန်အတူတကွရောစပ်ထားသည်။ ထုတ်လုပ်သူများကပစ္စည်းများကိုကြီးမားသောဗုံများဖြင့်ရောစပ်ပြီး ...
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများသည်အုတ်များထက်ပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာမှုမရှိသောကြောင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် အုတ်ပန်းရန် ပန်းချီဝါသနာရှင်များအကြိုက်ဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် pastime ။ အုတ်ပန်းရန်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်အိမ်ဆောက်ခြင်းအတွက်လူကြိုက်များသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုကျယ်ပြန့်သောစီမံကိန်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်အုတ်ပန်းရန်၏အခြေခံများကိုလေ့လာပါမည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ယင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်အကြံဥာဏ်ကိုစတင်ခဲ့လျှင်သင်ဖတ်ရှုသင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်အုတ်? ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အုတ်များသည်သူတို့၏စည်းလုံးမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအတွက်နာမည်ကောင်းရသဖြင့်အုတ်အိမ်များသည်သစ်သားအိမ်များထက်များစွာစျေးကြီးနိုင်သည်။ အယူအဆများကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်အုတ်များသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိသဖြင့်ဆေးသုတ်အလုပ်များသည်အုတ်အိမ်များတွင်နေထိုင်သူများအတွက်အတိတ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင်အုတ်အဆောက်အအုံများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောလျှပ်ကာနှင့်ကောင်းမွန်ပြီးမီးကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အုတ်အိမ်များသည်အတော်အတန်မတ်စောက်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်လာနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုပိုင်ဆိုင်သောသူများသည်ရေရှည်တွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်ငွေများစွာစုဆောင်းနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်နောက်တခါလူတစ်ယောက်က “ ဘာလို့အုတ်တွေလဲ?” ...